🥇 ▷ Cayayaanka muujinaya xiriirada on iPhone leh macruufka 13 ✅
Cayayaanka muujinaya xiriirada on iPhone leh macruufka 13
Mid ka mid ah tiirarka aasaasiga ah ee iOS 13 waa amniga. Ugu yaraan taasi waxay xaqiijisay Apple, kaas oo sheegaya in nidaamka hawlgalka cusub ee iPhone uu yahay mid aad u amaan badan isla markaana uu gaaro heerar sare dhinacyada nabadgelyada. Si kastaba ha noqotee, isticmaale ayaa ogaadey cilad u oggolaaneysa dhinacyada saddexaad marin u hel macluumaadka xiriirka ee shaqsiyeed ka boodista shaashadda qufulka.
Ciladdu waa inay fuliso wicitaan ka yimid Face Time ka dibna u gala shaqada Cod dheer ka Siri. Waqtigaas waxaad heli kartaa liistada taleefanka lagaala xiriiro, taasi waa, eeg dhammaan macluumaadka shaqsiyadeed ee xiriir kasta sida emaylkaaga ama lambarka taleefankaaga. Tani waxay dhacdaa, maadaama iOS 13 kuu oggolaanayo inaad ka booddo shaashadda furaha ama qufulka aqoonsiga wajiga Markii wicitaan la helo.
Apple wuu garanayaa
Isticmaalaha helay qaladka ayaa muujinaya in ay khaladaad u gudbiyeen Apple 17-kii Luulyo Dhiig-baxaas ayaa ah qaladka ayaa wali ku jira nooca Gold Master ee macruufka 13 kaas oo la sii deyn doono Sebtember 19. Arrinta xiisaha leh ayaa ah in isla isla isticmaaleygu sheegay khalad la mid ah sanadkii la soo dhaafay, oo laga helay nooca iOS 12.1. Waxay umuuqataa wax cajiib ah sidaa daraadeed in qaladku sii socdo in lagu soo saaro noocyada cusub iyo kuwa “nabdoon” ee nidaamka qalliinka Apple. Sida muuqata, tijaabooyinka lagu helayo cayayaankani “iOS 13.1 beta”, kaas oo la sii deyn doono Sebtember 30 ma shaqeynin, marka waa macquul in Apple I uu helay xalka.
macruufka iyo amniga
Apple Waxay salka ku haysay qayb wanaagsan oo ka mid ah doodaha macruufka 13 ee amniga iyo asturnaanta isticmaaleha, laakiin waxay umuuqataa in dariiqii ay jireen ay jireen waxyaabo muhiim ah oo la ilaalin karo. Xusuusnow in shirkadda tufaaxu rabto isticmaaleha ayaa leh xakameyn ku saabsan macluumaadka aad la wadaageyso codsiyada dhinac saddexaad, oo ay ku jiraan xakameyn ballaaran ee xulashooyinka goobta ama habka aqoonsiga ee inbadan oo ka mid ah (Saxiix Apple). Cillad la mid ah ayaa la helay. July ee la soo dhaafay ee iOS 13 beta, taas oo si aan la fahmi karin u oggolaatay marin-u-helka magacyada iyo furayaasha sirta ah iyada oo si fudud loogu riixayo qaybta “Passwords ee websaydhada iyo barnaamijyada”. Marka sidaas la yeelo waxaa lagu waayey habka sugida ee ” ID ID ‘ama’ ID ID ‘.